Lenovo သည် Ideacentre A540 ကိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းဒီဇိုင်းဖြင့် All-in-One ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
အသစ် မင်္ဂလာပါ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ ရုပ်ရှင်များ
ES : https://www.hebergementwebs.com/ordenadores/lenovo-desvela-el-centro-de-ideas-a540-un-diseno-inspirado-todo-en-una-computadora
EN : https://www.hebergementwebs.com/computers/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computer
CO : https://www.hebergementwebs.com/urdinatori/lenovo-svela-l-ideacentre-a540-un-design-ispiratu-tuttu-in-un-urdinatore
EO : https://www.hebergementwebs.com/komputiloj/lenovo-rivelas-la-ideocentron-a540-inspira-projekt-cion-en-unu-komputilon
BN : https://www.hebergementwebs.com/কম্পিউটার/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computer
BS : https://www.hebergementwebs.com/računari/lenovo-otkriva-ideacentre-a540-an-inspiriran-dizajn-sve-u-jednom-racunar
MN : https://www.hebergementwebs.com/компьютер/lenovo-ideacentre-a540-ийг-урам-зоригоор-бүтээсэн-дизайныг-бүгдийг-нь-нэг-компьютерт-танилцууллаа.
EU : https://www.hebergementwebs.com/ordenagailuak/lenovo-k-ideacentre-a540-inspiratutako-diseinua-ordenagailu-guztiak-batean-aurkezten-ditu
EL : https://www.hebergementwebs.com/Υπολογιστές/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspiration-design-all-in-one-computer
BE : https://www.hebergementwebs.com/кампутары/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computer
GL : https://www.hebergementwebs.com/ordenadores/lenovo-revela-o-ideacentre-a540-un-deseno-inspirado-todo-en-un-ordenador
GD : https://www.hebergementwebs.com/coimpiutairean/lenovo-reveils-the-ideacentre-a540-an-spreagadh-dealbhaidh-uile-ann-aon-coimpiutair
ID : https://www.hebergementwebs.com/komputer/lenovo-memperkenalkan-the-ideacentre-a540-desain-terinspirasi-komputer-semua-dalam-satu-komputer
BG : https://www.hebergementwebs.com/компютри/lenovo-разкрива-идеалния-център-a540-вдъхновен-дизайн-всичко-в-един-компютър
CA : https://www.hebergementwebs.com/ordinadors/lenovo-revela-l-ideacentre-a540-un-disseny-inspirador-tot-en-un-ordinador
AZ : https://www.hebergementwebs.com/kompüterlər/lenovo-ideacentre-a540-i-ilhamlanmis-dizayni-hamisini-bir-komputerdə-təqdim-edir
ET : https://www.hebergementwebs.com/arvutid/lenovo-avalikustab-ideekeskuse-a540-inspireeritud-disain-koik-uhes-arvuti
FI : https://www.hebergementwebs.com/tietokoneita/lenovo-esittelee-ideakeskuksen-a540-inspiroidun-suunnittelun-all-in-one-tietokoneen
IS : https://www.hebergementwebs.com/tölvur/lenovo-afhjupar-the-hugmyndamiðstoð-a540-innblastur-honnun-allt-i-einn-tolva
KO : https://www.hebergementwebs.com/컴퓨터/lenovo-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computer-공개
GA : https://www.hebergementwebs.com/ríomhairí/lenovo-nochtann-an-ideacentre-a540-an-spreagtha-dearadh-uile-i-aon-riomhaire
FA : https://www.hebergementwebs.com/کامپیوترها/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspiration-design-all-in-one-computer
IG : https://www.hebergementwebs.com/kọmputa/lenovo-ekpughere-ideacentre-a540-nke-sitere-n-ike-mmụọ-nsọ-imepụta-ihe-niile-n-ime-otu-kọmputa
DA : https://www.hebergementwebs.com/computere/lenovo-afslører-ide-centret-a540-en-inspireret-design-alt-i-en-computer
CS : https://www.hebergementwebs.com/počítače/lenovo-odhaluje-the-ideacentre-a540-inspirovany-design-vse-v-jednom-pocitaci
KY : https://www.hebergementwebs.com/компьютерлер/a540
DE : https://www.hebergementwebs.com/computers/lenovo-enthullt-das-ideacenter-a540-einen-inspirierten-design-all-in-one-computer
UR : https://www.hebergementwebs.com/کمپیوٹر/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computer
PL : https://www.hebergementwebs.com/komputery/lenovo-prezentuje-centrum-idei-a540-inspirowany-projekt-komputer-wszystko-w-jednym
HR : https://www.hebergementwebs.com/računala/lenovo-otkriva-idejni-centar-a540-nadahnuto-dizajn-sve-u-jednom-racunalo
HE : https://www.hebergementwebs.com/מחשבים/lenovo-חושפת-את-מרכז-הרעיונות-a540-מעוצב-מעוצב-כל-במחשב-אחד
JA : https://www.hebergementwebs.com/コンピューター/lenovo-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computerを発表
FY : https://www.hebergementwebs.com/kompjûters/lenovo-untbleatet-it-idee-sintrum-a540-in-ynspireare-untwerp-alles-yn-ien-komputer
HT : https://www.hebergementwebs.com/òdinatè/lenovo-devwale-lide-sant-a540-yon-enspire-konsepsyon-tout-an-yon-odinate
AM : https://www.hebergementwebs.com/ኮምፒውተሮች/ሌኖቮ-የ-ideacentre-a540-ተመስጦ-ንድፍ-በአንድ-ኮምፒውተር-ሁሉ
IT : https://www.hebergementwebs.com/computer/lenovo-svela-the-ideacentre-a540-un-computer-all-in-one-dal-design-ispirato
HU : https://www.hebergementwebs.com/számítógépek/a-lenovo-bemutatja-az-otletkozpont-a540-otleteit
SQ : https://www.hebergementwebs.com/kompjuterat/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-frymezuar-dizajn-gjithcka-ne-nje-kompjuter
GU : https://www.hebergementwebs.com/કોમ્પ્યુટર/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computer
MT : https://www.hebergementwebs.com/kompjuters/lenovo-jizvela-l-ideacentre-a540-disinn-ispirat-tal-kompjuter-kollu-f-wiehed
CY : https://www.hebergementwebs.com/cyfrifiaduron/lenovo-dadorchuddio-yr-ideacentre-a540-an-ysbrydoli-dylunio-popeth-mewn-un-cyfrifiadur
KK : https://www.hebergementwebs.com/компьютерлер/lenovo-a540-идея-орталығының-шабыттандырылған-дизайнын-барлығы-бір-компьютерде-ашады
LT : https://www.hebergementwebs.com/kompiuteriai/„lenovo“-pristato-„ideacentre-a540“-ikvepta-dizaino-„viskas-viename“-kompiuteri
NO : https://www.hebergementwebs.com/datamaskiner/lenovo-avduker-the-ideacentre-a540-en-inspirert-design-alt-i-en-datamaskin
RO : https://www.hebergementwebs.com/calculatoare/lenovo-dezvaluie-ideea-centru-a540-un-proiect-inspirat-de-computer-all-in-one
LV : https://www.hebergementwebs.com/datori/lenovo-iepazistina-ar-ideju-centru-a540-iedvesmotu-dizaina-visu-viena-datora
KA : https://www.hebergementwebs.com/კომპიუტერები/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspiration-design-all-in-one-computer
NY : https://www.hebergementwebs.com/makompyuta/lenovo-akuwululira-ideacentre-a540-wopanga-makina-onse-mu-kompyuta-imodzi
PT : https://www.hebergementwebs.com/computadores/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspir-design-all-in-one-computer
NL : https://www.hebergementwebs.com/computers/lenovo-onthult-het-ideeencentrum-a540-een-geinspireerde-design-alles-in-een-computer
SI : https://www.hebergementwebs.com/පරිගණක/ලෙනොවෝ-එළිදැක්වීම-thedeacecentre-a540-ආනුභාවයෙන්-නිර්මාණය-සියල්ල-තුළ-එක්-පරිගණකයක්
ML : https://www.hebergementwebs.com/കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ/ലെനോവോ-അനിൽസ്-ദി-ഐഡിയസെന്റർ-എ-540-ഒരു-പ്രചോദനം-ഡിസൈൻ-ഓൾ-ഇൻ-വൺ-കമ്പ്യൂട്ടർ
PS : https://www.hebergementwebs.com/کمپیوټرونه/lenovo-unwils-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computer
SO : https://www.hebergementwebs.com/kombiyuutarada/lenovo-oo-soo-bandhigtay-ideacentre-a540-oo-loo-waxyooday-naqshadeynta-dhammaan-hal-kombiyuutar
ST : https://www.hebergementwebs.com/likhomphutha/lenovo-e-senola-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computer
SV : https://www.hebergementwebs.com/datorer/lenovo-presenterar-the-idecentret-a540-en-inspirerad-design-allt-i-ett-dator
MS : https://www.hebergementwebs.com/komputer/lenovo-melancarkan-reka-ideacentre-a540-an-inspirasi-reka-semua-dalam-satu-komputer
SL : https://www.hebergementwebs.com/računalniki/lenovo-predstavi-idejni-center-a540-navdihnjen-dizajn-vse-v-enem-racunalnik
KN : https://www.hebergementwebs.com/ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು/ಲೆನೊವೊ-ಅನಾವರಣ-ದಿ-ಐಡಿಯಾಸೆಂಟರ್-ಎ-540-ಆನ್-ಸ್ಫೂರ್ತಿ-ವಿನ್ಯಾಸ-ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್
ZH-TW : https://www.hebergementwebs.com/電腦/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computer
UK : https://www.hebergementwebs.com/комп’ютери/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computer
TK : https://www.hebergementwebs.com/kompýuterler/lenovo-the-ideacentre-a540-ylhamlanan-dizayn-hemmesi-bir-kompyuter
RW : https://www.hebergementwebs.com/mudasobwa/lenovo-yashyize-ahagaragara-idacentre-a540-yahumekewe-igishushanyo-byose-muri-mudasobwa-imwe
HA : https://www.hebergementwebs.com/kwakwalwa/lenovo-ta-buɗe-da-ideacentre-a540-wani-wahayi-ƙira-duk-a-ɗaya-kwamfuta
ZU : https://www.hebergementwebs.com/amakhompyutha/i-lenovo-yembula-i-ideacentre-a540-i-design-ephefumulelwe-konke-kukhompyutha-eyodwa
TE : https://www.hebergementwebs.com/కంప్యూటర్లు/లెనోవో-ఆవిష్కరణలు
RU : https://www.hebergementwebs.com/компьютеры/lenovo-представляет-ideacentre-a540-an-вдохновленный-дизайн-все-в-одном-компьютере
YI : https://www.hebergementwebs.com/קאָמפּיוטערס/לענאָוואָ-אַנוויילז-דעם-געדאַנק-צענטער-אַ-540-אַן-ינספּייערד-פּלאַן-אַלע-אין-איין-קאָמפּיוטער
TR : https://www.hebergementwebs.com/bilgisayarlar/lenovo-the-ideacentre-a540-ilhamli-tasarimli-hepsi-bir-arada-bilgisayari-tanitti
XH : https://www.hebergementwebs.com/iikhompyuter/i-lenovo-ityhila-i-ideacentre-i-a540-uyilo-oluphefumlelweyo-kuyo-yonke-ikhompyuter
TG : https://www.hebergementwebs.com/компютерҳо/lenovo
AR : https://www.hebergementwebs.com/أجهزة-الكمبيوتر/لينوفو-تكشف-عن-the-ideacentre-a540-an-inspiration-design-all-in-one-computer
PA : https://www.hebergementwebs.com/ਕੰਪਿਟਰ/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computer
SW : https://www.hebergementwebs.com/kompyuta/lenovo-yafunua-ideacentre-a540-imeunda-kubuni-yote-katika-kompyuta-moja
TT : https://www.hebergementwebs.com/санаклар/леново-ачыла-идеентр-a540-илһамландырылган-дизайн-барысы-да-бер-компьютер
SD : https://www.hebergementwebs.com/ڪمپيوٽر/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computer
VI : https://www.hebergementwebs.com/máy-vi-tính/lenovo-un-the-ideacentre-a540-an-inspi-red-design-all-in-one-computer
YO : https://www.hebergementwebs.com/awọn-kọmputa/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-atilẹyin-apẹrẹ-gbogbo-ni-ọkan-kọnputa
UZ : https://www.hebergementwebs.com/kompyuterlar/lenovo-ideacentre-a540-ilhomlantiruvchi-dizayn-hammasi-bitta-kompyuterda
MR : https://www.hebergementwebs.com/संगणक/lenovo-unveils-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-in-one-computer
UG : https://www.hebergementwebs.com/كومپيۇتېر/lenovo-the-ideacentre-a540-an-inspired-design-all-all-one-computer
FR : https://www.hebergementwebs.com/ordinateurs/lenovo-devoile-l-ideacentre-a540-un-ordinateur-tout-en-un-au-design-inspire
IFA မှာ Lenovo က ဦး ဆောင်နေပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူသည်၎င်းသည်ဘာလင်ကုန်စည်ပြပွဲတွင်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော all-in-one Windows 10 desktop computer ၌ပြသမည့်စားသုံးသူထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ Ideacentre A540 ဟုခေါ်သည်၎င်းသည် "သဟဇာတဆန်သောအချိုးမညီသော" ဒီဇိုင်းဖြင့်ကွဲပြားသည်။ ထင်းရူးပင်များ” မှကွေးညွတ်သောသတ္တုအထောက်အပံ့နှင့်၎င်း၏မျက်နှာပြင်နှင့်၎င်း၏အောက်ခြေကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ resolution မြင့် display ကို ၂၄ နှင့် ၂၇ လက်မအရွယ်အစားနှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပြီး touch version ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အခြေခံအနေနှင့်၎င်းသည် PC ပိတ်ထားသည့်တိုင် Qi အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ၏ကြိုးမဲ့အားသွင်းမှုအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုပေးသည်။
တစ်ယောက်ကဒီဟာကိုစက်တင်ဘာ ၅ ရက်မှာဘာလင်မှာပြုလုပ်တဲ့ထုတ်လုပ်သူရဲ့အစည်းအဝေးမှာသေချာကြည့်မှာသေချာပါတယ်။
9th generation Intel Core i7 နှင့် AMD Radeon RX560 ပရိုဆက်ဆာများနှင့်အတူ ၂၇ လက်မအရွယ် Ideacentre A540 မော်ဒယ်သည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။ကြည်လင်ပြတ်သားသောအရောင်များအတွက်ကြည်လင်ပြတ်သားသော QHD display JBL Harman စပီကာများသည် Dolby Audio နည်းပညာဖြင့်စတီရီယိုအသံကိုပေးသည်။
AMD ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ၂၄ လက်မမော်ဒယ်တွင် Ryzen ™ပရိုဆက်ဆာ Lenovo မှနောက်ဆုံးထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သော all-in-one IdeaCentre A540 သည်အသုံးပြုသူအားသူ၏ device ကို facial recognition မှတဆင့်သော့ဖွင့်ရန်အနီအောက်ရောင်ခြည်ကင်မရာတပ်ဆင်ထားလိမ့်မည်။ သူ့မျက်လုံးတွေကိုပိတ်လိုက်ပါ” အလိုရှိသည်။ ၂၄ လက်မအရွယ် Ideacentre A540 ကိုယူရို ၇၉၉ နဲ့ ၂၇ လက်မမော်ဒယ်ကို ၉၉၉ ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မော်ဒယ်နှစ်ခုလုံးကို
2021-08-17 23:55:07 | ကွန်ပြူတာများ...
ကမ္ဘာကြီးက microchips တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ဖုန်း (သို့) laptop ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပိုအသေးစိတ်တဲ့အရာတွေတင်မကဘဲ၊ မင်းသတိတောင်မထားမိတဲ့ပုံမှန်အရာတွေအများကြီးထဲကအများစုပါ။ သူတို့သည်သင်၏ကား၏လျှပ်စစ်ပြတင်းပေါက်များနှင့်သင်၏ကော်ဖီဖျော်စက်၏ timer ကိုဖွင့်ပေးသည်။ ဒါပေမယ့်ချစ်ပ်ရှားပါးမှုကခွေးဆေးသုတ်ခန်...
Macos monterey သည်လမ်းတွင်ရှိသည်၊ ပန်းသီးသည် wwdc တွင် macos 12 preview ကိုတင်ပြခဲ့ပြီး၎င်းအားနာမည်ပေးခဲ့သည်
2021-08-17 23:37:25 | ကွန်ပြူတာများ...
MacOS Monterey တွင် Apple ၏ Universal Control feature အသစ်သည်မင်းရဲ့ mouse နဲ့ keyboard ကိုသုံးပြီး device များအကြား content များကိုရွှေ့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ Apple သည်ဤအဖြစ်အပျက်သည် Apple Event ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ Apple HQ မှနောက်ဆုံးသတင်းကိုငါတို့လွှမ်းခြုံသည်။ တနင်္လာနေ့တွင်ပြုလုပ်သောကမ္ဘာလုံး...
IPad 15: Apple ၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး iPad နည်းလမ်းအသစ်သည်သင်၏ Mac အတွက်အမှန်ဖြစ်သည်
2021-08-17 23:37:02 | ကွန်ပြူတာများ...
Scott Stein ၏ Apple Screenshot ဤဇာတ်လမ်းသည် Apple ဖြစ်ရပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ Apple ဌာနချုပ်မှနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောဖော်ပြမှုဖြစ်သည်။ iPad သည် multitasking အကြီးစားပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ Apple သည်ယခုနှစ် WWDC Virtual Keynote အတွင်းလာမည့် iPadOS 15 ၌ multitask ပြုလုပ်နို...
Macos monterey သည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်ရန် low power mode ကိုရရှိသည်
2021-08-17 23:12:27 | ကွန်ပြူတာများ...
Apple software အကြီးအကဲ Craig Federighi က MacOS ၏နောက်ဗားရှင်းကို Monterey ဟုခေါ်သည်။ Screenshot Apple ဤဇာတ်လမ်းသည် Apple Event ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ Apple HQ မှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းခြုံသည်။ Apple ၏လာမည့် MacOS Monterey software သည်သင်၏ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုကြာရှည်ခံစေမည့် low powe...
Macos monterey ကို wwdc တွင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်၊ ဤတွင်ငါတို့သိသည်
2021-08-17 22:31:12 | ကွန်ပြူတာများ...
ယခု mac အသစ်ကိုဘယ်သူ ၀ ယ်သင့်ပြီးဘယ်သူစောင့်သင့်သလဲ
2021-08-17 21:22:49 | ကွန်ပြူတာများ...
ဤဇာတ်လမ်းသည် Apple Event ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ Apple HQ မှနောက်ဆုံးသတင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောလွှမ်းခြုံမှုဖြစ်သည်။ Apple ၏ WWDC 2021 တွင်ပြုလုပ်သော Mac Hardware အသစ်ကိုဘယ်မှာမှရှာမတွေ့ပါ။ M1 စွမ်းအင်သုံးလက်ပ်တော့များနှင့်ဒက်စ်တော့ခ်အသစ်များကိုယူဆောင်လာခဲ့သောခုနစ်လတာကာလအတွင်း Apple ၏စီလီကွ...
Apple m1 macs များသည် Adobe Lightroom Classic ၏ဗားရှင်းအသစ်ကိုလျင်မြန်စွာရရှိသည်
2021-08-17 21:03:54 | ကွန်ပြူတာများ...
Apple ၏ ၂၀၂၀ ၁၃ လက်မ MacBook Air သည်ကုမ္ပဏီ၏ M1 ပရိုဆက်ဆာဖြင့်မောင်းနှင်သောပထမဆုံးကွန်ပျူတာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Stephen Shankland ဤဇာတ်လမ်းသည် Apple Event ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်၊ Apple HQ မှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုငါတို့အပြည့်အဝဖော်ပြခဲ့သည်။ Adobe သည်အင်္ဂါနေ့က M1 processor အသစ်သုံး Macs များအတွက်သ...
Macos monterey ရှိ apple universal control function သည်ဖန်သားပြင်နှစ်ခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုပွင့်လင်းစေသည်
2021-08-17 21:02:28 | ကွန်ပြူတာများ...
Apple ၏ universal control အသစ်သည်သင်၏ mouse နှင့် keyboard ကိုသုံးပြီး device များအကြား content များကိုရွှေ့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ Sarah Tew ၏ Screenshot ရိုက်ချက် ဤဇာတ်လမ်းသည် Apple Event ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ Apple HQ မှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုငါတို့လွှမ်းခြုံသည်။ တနင်္လာနေ့တွင် Apple သည်သင့်အား Mac...
စောစောစီးစီးလက်တော့ပ်များ၊ Prestige 14 msi တွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၊ Dell xps 13 နှင့်အထက် ၅၀၀ ဒေါ်လာ
2021-08-17 20:40:30 | ကွန်ပြူတာများ...
Gateway ၁၄. ၁ လက်မ FHD Ultra-thin laptop: ၄၂၉ ဒေါ်လာ Acer Aspire5A515-55-576H: $ 530 Newegg Dell Inspiron 14 တွင် $ 530 Save $ 703 $ 560 Save DellLenovo IdeaPad S340 တွင် $ 560 Save $ 110 Amazon Amazon Yoga C740: $ 750 Save $ 750 ၃၀၀ မှာ ၇၅၀ ဒေါ်လာ...
Playdate, လွတ်လပ်သောလက်ဖြင့်ကိုင်ထားသောလက်ကိုင်ဂိမ်းစက်ကိုဇူလိုင်လတွင် ၁၇၉ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချလိမ့်မည်
2021-08-17 20:01:59 | ကွန်ပြူတာများ...
Playdate တွင်အဖြူအမည်း screen နှင့် crank တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ Untitled Goose Game ထုတ်လုပ်သူများကတီထွင်ထားသည့်ကတိပြုထားသော Indie အဖြူအမည်းဂိမ်းလက်ကိုင် Panic's Playdate သည်နောက်ဆုံးတွင်မကြာမီရောင်းချတော့မည့်ပုံပေါ်သည်။ ၁၇၉ ဒေါ်လာတန်လက်ကိုင်ကိုဇူလိုင်လတွင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါသည်။ Wi-Fi မှတဆင့်အခမဲ့ ၀ န်ဆ...
အကောင်းဆုံး Lenovo လက်ပ်တော့များ၊ Thinkpad နှင့် Yoga မော်ဒယ်သစ်များကိုချွေတာပါ
2021-08-17 20:01:12 | ကွန်ပြူတာများ...
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen9ကိုဒေါ်လာ ၁, ၁၃၉ ဒေါ်လာ၊ Lenovo ThinkPad X1 NanoSave ဒေါ်လာ ၁, ၁၆၇, Lenovo Lenovo ThinkPad T14s Gen2ကိုဒေါ်လာ ၁, ၁၉၉, Lenovo Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen2တွင်ဒေါ်လာ ၆၇၅, Save $ ၆၇၅ ဒေါ်လာကို Lenovo Lenovo Yoga 9i တွင်သိမ်းဆည်းပါ။ Lenovo မှ ၃၂၀ ဒေါ်လာ ၁, ၂၈၀ တွင် A...
Xbox series x သည်အဆုံးမဲ့နေရောင်ခြည်မပါဘဲယခုလတွင်စတင်သည်
2021-08-17 19:58:14 | ကွန်ပြူတာများ...
Xbox Series X ကိုနိုဝင်ဘာလတွင်ရောင်းချသည်။ လာမယ့် Xbox ကိုဘယ်အချိန်တွေ့မယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ Microsoft ကနိုဝင်ဘာလမှာ Xbox Series X ကိုမိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးသည် ၂၀၂၀ အားလပ်ရက်ရာသီအတွက်အချိန်ဇယားကိုကတိပြုပြီးနောက်အင်္ဂါနေ့၌စျေးနှုန်းကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပေ။ ရောင်းရန်သို့မဟုတ်မပြ...
Xbox series x restock: Microsoft သည် xbox စတိုးသို့စာရင်းပိုထည့်ခဲ့သည်
2021-08-17 19:47:59 | ကွန်ပြူတာများ...
မကြာမီ Xbox Series များပြန်လည်ထည့်သွင်းတော့မည်ဟူသောကောလာဟလအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း Microsoft သည်အင်္ဂါနေ့တွင် Xbox Store တွင်၎င်း၏စာရင်းကိုထပ်ဖြည့်ခဲ့သည်။ Xbox Series X console များကို၎င်းတို့မရောင်းမီအချိန်တိုအတွင်းရနိုင်သည်။ E3 2021 ကိုဇွန်လ ၁၂ မှစတင်၍ Microsoft နှင့်အခြားလက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်သီတင်း...
Google ရေငုပ်သင်္ဘောကေဘယ်လ်အသစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၊ ဘရာဇီးနှင့်အာဂျင်တီးနားအကြားဒေတာစီးဆင်းမှုကိုစီမံပေးသည်
2021-08-17 18:31:32 | ကွန်ပြူတာများ...
သင်္ဘောတစ်စင်းသည်ရေငုပ်သင်္ဘောကေဘယ်လ်ကိုဂူဂဲလ် GoogleGoogle ကမင်းရဲ့ megabits ကို Boston ကနေ Buenos Aires ကိုပြန်ဖို့အတွက်ရေငုပ်သင်္ဘောကေဘယ်အသစ်ကိုတည်ဆောက်နေပါတယ်။ ဘရာဇီးဖျက်သိမ်းရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်သော Firmina ဟုခေါ်သော fiber-optic လိုင်းသည် ၂၀၂၃ တွင်အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်း၊ ဘရာဇီး၊ ဥရုဂွေးနှင့်အာဂျင်တီး...
Nvidia geforce rtx 3070 ti gaming GPU သည် 1440p တွင်ပျက်ကျသည်
2021-08-17 18:31:03 | ကွန်ပြူတာများ...
Lori Grunin Nvidia's GeForce RTX 3070 Ti သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကအဆင်းရဲဆုံး GPU ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ ငါလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ gaming performance test တိုင်းမှာ ၃၀၇၀ Ti က RTX 3000 series နဲ့ AMD Radeon RX 6000 series ကတ်များရဲ့ဧရိယာအတွင်းမှာ median ရမှတ်ကို ၅၉၉ (£ 529) AU $ 979) သည်အဆင့်မြှင့်တင်...
၂၀၂၁ အတွက်အကောင်းဆုံး vr နားကြပ်
2021-08-17 18:12:09 | ကွန်ပြူတာများ...
လူတွေဟာအရင်ကထက်ပိုဝေးကွာနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာ virtual reality ဟာမကြာသေးမီလများအတွင်းအဓိပ္ပာယ်သစ်တခုလုံးကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။ Virtual reality သည်လူမှုရေးအရစုဝေးရန်နေရာ (သို့) အလုပ်ခွင်မဟုတ်သော်လည်းငါဖြစ်ချင်တာကပိုနီးသည်။ Oculus Quest သည် home VR console တစ်ခုနှင့်အနီးဆုံးအရာဖြစ်လာသည်။ ဒါပေမယ့်နည်းပညာတွေကအမ...
ဘရာဇီးနှင့်အာဂျင်တီးနားတို့အကြားဒေတာများ ၀ င်ရောက်မှုကိုစီမံရန် google ရေငုပ်သင်္ဘောကေဘယ်လ်အသစ်
2021-08-17 18:02:13 | ကွန်ပြူတာများ...
Macos monterey: နောက်ဆုံးပေါ် apple mac software update အကြောင်းသင်သိရန်လိုသည်
2021-08-17 18:01:20 | ကွန်ပြူတာများ...
Ps5 restocking update: playstation5ကိုအကောင်းဆုံး ၀ ယ်နည်း၊ Amazon နှင့်အခြားအဓိကလက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်မည်သို့ ၀ ယ်နည်း
2021-08-17 16:17:58 | ကွန်ပြူတာများ...
ယခုအပတ်တွင် PlayStation5ပြန်လည်ထည့်သွင်းမှုမှာငြိမ်သက်သွားသည်။ တနင်္လာနေ့တွင် GameFly ကိုသာပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုရက် ၃၀ ထက်ပိုသုံးနေသောအဖွဲ့ဝင်များသာပါဝင်နိုင်သည်။ E3 2021 နှင့်စနေနေ့ မှစတင်၍ PS5 ၏အံ့အားသင့်ဖွယ်ပြန်လည်အားဖြည့်မှုကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ မရ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် Amazon ဟာဒီနှစ်ဇွ...
Google ရေငုပ်သင်္ဘောကေဘယ်လ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၊ ဘရာဇီးနှင့်အာဂျင်တီးနားအကြားဒေတာတိုးလာမှုကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မည်
2021-08-17 15:56:04 | ကွန်ပြူတာများ...
Ship lays submarine cable Google GoogleGoogle သည်အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်း၊ ဘရာဇီး၊ ဥရုဂွေးနှင့်အာဂျင်တီးနားအကြားသင်၏ megabits များကိုသယ်ဆောင်ရန်ရေငုပ်သင်္ဘောကေဘယ်အသစ်ကိုတည်ဆောက်နေသည်။ ဘရာဇီးဖျက်သိမ်းရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်သော Firmina ဟုခေါ်သော fiber-optic လိုင်းသည် ၂၀၂၃ တွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်လျာထားသည်။ အင်တာ...